Van Dijk oo ka hadlay arragtidiisa ku aadan guuldarradii Man City ka soo gaartay kooxda Wolverhampton – Gool FM
Van Dijk oo ka hadlay arragtidiisa ku aadan guuldarradii Man City ka soo gaartay kooxda Wolverhampton
Dajiye October 7, 2019
(Liverpool) 07 Oct 2019. Daafaca kooxda Liverpool ee Virgil van Dijk ayaa sheegay inuu la yaabay guuldarradii Manchester City ka soo gaartay Wolverhampton kulankii Premier League-ga ay Axadii shalay ku wada ciyaareen garoonka Etihad.
Manchester City oo ku dhex sugneyd jamaahiirteeda iyo garoonkeeda Etihad ayaa guuldaro 0-2 ah kala kulantay kooxda Wolverhampton, kulankoodii 8-aad ee horyaalka Premier League.
Haddaba Virgil van Dijk ayaa wareysi uu ku bixiyay shabakada “Sky Sports” ee dalka England wuxuu ku sheegay:
“Ma fileynin taasi, qof walba wuxuu sheegay inay u aheyd ciyaar adag kooxda Manchester City, laakiin waan la yaabay maxaa yeelay wax badan ma aysan dhicin”.
“Manchester City wax gool ah kama aysan dhalinin kulankaan, tanina waxay aheyd wax la yaab leh, sidoo kale Wolverhampton waxay sameysay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, sidaa darteed waa inaan diirada saarnaa kulan kasta si aan uga hor tagno inaysan sidan oo kale nagu dhacin”.
Intaas kaddib Virgil van Dijk ayaa la waydiiyay su’aal aheyd bal in xilli ciyaareedkan uu yahay sannadkii Liverpool, wuxuuna ku jawaabay:
“Wax walba ayaa dhici kara. Man City way soo laaban kartaa sidii ay sameeyeen xilli ciyaareedkii hore, waxayna ku guuleysatay horyaalka”.
RASMI: Tottenham oo shaacisay muddada uu garoomada ka maqnaanayo goolhaayaheeda Hugo Lloris.
Xiriirka UEFA oo soo diiday codsigii Booliska Ingiriiska ee ahaa in la bedelo xilliga la ciyaarayo kulanka England iyo Czech Republic